5 Qof Allah Uma Dambi Dhaafo | Maan Kaab
Home Hormarinta Nafta 5 qof allah uma dambi dhaafo
5 qof allah uma dambi dhaafo
Sheekh Mufti Menk marka uu sharraxayay arrintan wuxuu ku qeexay dhibaato aad u weyn oo aan wajaheyno, maadaama loo baahan yahay inaan iska ilaalinno galitaanka liiska dadka uusan Allah u dambi dhaafin, abaalkooduna uu yahay naarta.
Haddaba si aad u barato dadkaas, si taxaddar leh u akhriso maqaalkan, waxaana rajeyneynaa inuu kuu noqdo wacyi galin ku anfacda.
1- Qofka shirkiga sameeya
Allah wuxuu noo sheegay in aannaan mar walba ka quusanin raxmaddiisa, dambi dhaafna ka raadsanno.
Laakiin waxaa jira dad cayiman oo aan heli doonin fursaddaas. Waxaa ka mid ah qofka Allah caabuditaankiisa la wadaajiya wax kale ama u shariik yeela.
Allah wuxuu ballan qaaday in qofka sidaas sameeya uusan u dambi dhaafi doonin, balse wax walba uu kasoo hara uu cafin karo haddii uu doono.
Dabcan marxaladda aan ka hadleyno waa in qofka uu dhinto isagoo aan ka toobad keenin dambiga uu ku dhex jiray.
2- Qofka cuqdadda u qaba qof kale
Shanta ruux ee Allah uusan dambigooda dhaafin waxaa kale oo ka mid ah qofka dhinta isagoo cuqdad, xumaato iyo nacayb caloosha ugu haya qof kale oo muslim ah.
Sidaas darteed, waxaa loo baahan yahay inaad qalbigaaga nadiifiso haddii aad dooneyso inaad janno hesho sababtoo ah qofka sifadan ku dhinta wax fursad ah uma laha abaalmarintaas, sida uu Allah ballan qaaday.
Akhriso: 10-kan dabeecadood waa qasab in caruurta la bar
Rasuulka CSW ayaa farta ku fiiqay nin ka mid ah asxaabtiisa oo sii socda markaas ayuu saxaabadii kale ku yidhi: “haddii aad dooneysaan inaad aragtaan nin ehlu janno ah, waa kaas”.
Kaddib waxay asxaabtii dabagal ku sameeyeen ninkii iyagoo ku dadaalaya inay ogaadaan waxa uu sameeyo ee uu ku muteystay jannada.
Waxay ogaadeen in uusan cibaado badan sameynin ama waxyaabo dheeraad ah, laakiin wuxuu u sheegay in hal wax oo uu sameeyo uu yahay in waligiis hal habeen uusan seexanin isagoo qof muslim ah qalbiga xumaan ugu haya.
Habeen walba marka uu sii seexanayo wuxuu nadiifin jiray qalbigiisa, wuxuuna hurdada gali jiray isagoo aan cidna cuqdad u qabin.
3- Qofka kibirka badan
Alle wuxuu sheegay in uusan u dambi dhaafi doonin qofka Kibirka iyo isla weyninka qaba.
Mid ka mid ah sifooyinka Alle waa kibirka, kaligiis ayayna u sugnaatay sifadaas. Sidaas darteed Ilaah ma jecla kuwa kibirka iyo islaweyninka ku dhiba dadka kale.
Isla weynanka waxaa soo hoos gali kara qaabka labiska, isticmaalka hantida iyo hab dhaqanka.
Markii uu nabiga CSW yidhi qof uu qabligiisa kibir ama islaweynin ku jiro ma gali doono Jannada, waxay ku dhaheen “Rasuulkii Allow, waxaan jecel nahay dharka quruxda badan iyo hantida, maxaa nagu dhici doona?”
Markaas ayuu Rasuulku yidhi: “Taas ma aha calaamadda isla weyninka. Calaamadda islaweyninka waa marka uu qofka uu runta inkiro, dadka kalena quursado”.
Haddii aad adigu isu aragto qofka kaliya, dadka kalena kasoo qaaddo inaysan waxba ahayn, markaas ayaad yeelatay astaamaha kibirka iyo isla weyninka, oo ah mid kaa hor istaageysa dambi dhaafka Allah iyo Jannadiisa.
4- Qofka qaraabada gooya
Ruuxa si ulakac ah u gooya xiriirka ehelka iyo qaraabada, ma heli doono dambi dhaafka Alle iyo abaalmarinta wanaagsan.
Dadka qaar ayaa xubnaha qoyskooda u gooya sabab la’aan ama waxyaabo la xiriira adduunyada, sida hantida, lacag darteed ama ismaandhaaf yar oo soo kala dhex gala awgiis.
Laakiin Alle wuu ka caroodaa kuwa sidaas sameeya sababtoo ah isaga ayaa u doortay inay ehel iyo qaraabo noqdaan raallina kama aha in ay is gooyaan.
5- Qofka aan dooneynin inuu xumaanta iska dhaafo
Mid ka mid ah dadka aan nasiibka u yeelan doonin dambi dhaafka iyo cafika Allah waa qof xumaanta ku dhex jira qorshahana aysan ugu jirin inuu iska joojiyo, si niyad ah ama uu dambi dhaaf ka raadsado Allah.
Xumaanta waxay noqon kartaa nooc walba, sida balwadda iyo dhaqamada xun xun.
Alle hana dhigo kuwii loo dambi dhaafo.
Previous articleDadka Ugu Taajirsan Caalamka 2021
Next article10-kan dabeecadood waa qasab in caruurta la baro